KNU ကော့ကရိတ်မှာ နိုင်ငံရေးသင်တန်း ဖွင့် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း KNU ကော့ကရိတ်မှာ နိုင်ငံရေးသင်တန်း ဖွင့်
KNU ကော့ကရိတ်မှာ နိုင်ငံရေးသင်တန်း ဖွင့်
အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးက ကော့ကရိတ်မြို့ နယ်မှာ အခြေခံနိုင်ငံရေးသင်တန်းတခု ပို့ချပေးနေပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွင်း နိုင်ငံရေးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ဖို့ ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်လို့ KIC သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်ကနေ ၂၄ ရက်အထိ ၅ ရက်ကြာပြုလုပ်မယ့် နိုင်ငံရေးသင်တန်းမှာ KNU လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များအနက် အကြောင်းအရာငါးခုကို ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းကို ကော့ကရိတ် မြို့နယ်ရှိ စုကလိ၊ ဖလူး၊ သေ့ဘောဘိုး၊ ဆုံဆည်းမြိုင်၊ မောခီးနှင့် နို့ဖိုး စတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုများက လူ ၇၀ ကျော် တက်ရောက်နေပါတယ်။
KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုစောလှထွန်းက သင် ကြားပို့ချနေတာဖြစ်ပြီး အလားတူသင်တန်းမျိုး ၃ ကြိမ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
………………. ။ ။ …………….
KNU က ကော့ကရိတျမှာ နိုငျငံရေးသငျတနျး ဖှငျ့
အပဈရပျတပျဖှဲ့တခုဖွဈတဲ့ KNU ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံးက ကော့ကရိတျမွို့ နယျမှာ အခွခေံနိုငျငံရေးသငျတနျးတခု ပို့ခပြေးနပွေီး အဖှဲ့အစညျးအတှငျး နိုငျငံရေးစှမျးရညျမွှငျ့တငျဖို့ ရညျရှယျဖှငျ့လှဈတာဖွဈတယျလို့ KIC သတငျးမှာ ဖျောပွပါတယျ။
စကျတငျဘာ ၂၀ ရကျကနေ ၂၄ ရကျအထိ ၅ ရကျကွာပွုလုပျမယျ့ နိုငျငံရေးသငျတနျးမှာ KNU လုပျဆောငျနတေဲ့ လုပျငနျးစဉျမြားအနကျ အကွောငျးအရာငါးခုကို ပို့ခသြှားမှာဖွဈပွီး သငျတနျးကို ကော့ကရိတျ မွို့နယျရှိ စုကလိ၊ ဖလူး၊ သဘေ့ောဘိုး၊ ဆုံဆညျးမွိုငျ၊ မောခီးနှငျ့ နို့ဖိုး စတဲ့ ကြေးရှာအုပျစုမြားက လူ ၇၀ ကြျော တကျရောကျနပေါတယျ။
KNU ထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ တှဲဖကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး(၂) ပဒိုစောလှထှနျးက သငျကွားပို့ခနြတောဖွဈပွီး အလားတူသငျတနျးမြိုး ၃ ကွိမျတိုငျဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။
Previous articleအင်ဒိုက ရခိုင်အတွက် လေယာဉ် နှစ်စင်းစာ ကယ်ဆယ်ပစ္စည်း ပေးပို့
Next articleရခိုင်အရေး အချက် ၁၁ ချက်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ဖို့ အစိုးရ ဆုံးဖြတ်